Ijoolleen lakkuun abbaa lama irraa dhalachuun isaanii mirkanaaye - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Ijoolleen lakkuun abbaa lama irraa dhalachuun isaanii mirkanaaye
Hireen lakkuun abbaa ykn dhiira lama irraa dhalachuu 13,000 keessaa tokko
Lakkuun lamas, sadis, achii olis haadha takka irra nidhalatu. Haati lakkuu 8 dhaltee guudiisaartus jirti. Garuu, hundi keenna kan hubannu hangamuu haabay’atanii lakkuun hundi haadha takka; abbaanis lakkuun takkuma. Oduun hubannaa keenna isa yeroo dheeraa faallessu gadi bayeera. Lakkuu haadhaan takkaa, garuu abbaa lamaa.
Ameerikaa New Jersey irraa oduun dhagayame lakkuun lama hadha takkaafi abbaa lama qabaachuu isaaniiti. Haati ijoollee tanaas hanga yeroo dhiyootti ijoolleen lamaanuu abbaa tokko irraa dhalachuu isaaniiti kan hubattu. Gara boodaatti garruu, yoo haati yeroo torbaan tokko incaalle keessatti dhiira lama wojjiin ciisuu isii amantu namichi lammataa DNAn ijoolle akka ilallamau gaafata; durumaa kaasee shakkii ijoolleen tuni tiyya jedhu waan ufkeessaa qabuuf. Ta’us, qorannoon DNA akka hawwii isaa ijoollee lamaanuu kan isaaf murteessu hinturre. DNAn kan mirkaneesse ijoolleen lakkuun dhiiga haadhaatiin malee kan abbaatiin firummaa kan hinqabne ta’uu isaaniiti. DNAn lakkuu abbaan adda baasuudhaan kan namoota falamaa seenan lachuu jiddutti nag buuse.
Saayinsistoonni mudannoo akkanaatiin superfecundation jedhu.Akka qorattootaatti kuni kan uumame yeroo jalqabaatiifii miti; isa dhumaas hinta’u. Hireen lakkuun abbaa ykn dhiira lama irraa dhalachuu jira: mudannoon akkanaa 13,000 keessaa tokko, akka qorannoo saayinsistootaatti .
Dhimmichi kuni guutummatti marsaa laguu dubartootaatiin wolqabata. Afaan saayinsiitiin haati ijoollee tanaa yeroo marsaa laguu isiitti killee lama altokkoon gadi lakkiste. Ammas marsama san keessatti dhiira lama woliin wolqunnamtii goote. Killen lameenuu namoota adda addatiin kan cabde. Bifa kanaan abbaan lakkootaa lama ta’e kan asbaye.
abbaa lamaa irraa dhalachuu
Previous articleLaaybeeriyaan Iboolaa too’annaa jala oolchite
Next articleKaaraachii Paakistaanitti hidhattoonni namoota 45 ajjeesanii heddu madeessan